Inkcazo Inkcazo yeMat. Sherman, Colorado
Inkcazo yendlela ye-Mt. 14,366. USherman
Intaba uSherman, phakathi kwe-North-ukuya kwi-Routing Range Range, i-14,036-foot-high (4,278 meter) ephakamileyo ngaphaya komda wasentshonalanga kwiSouth Park ephakathi kweColorado. INtaba uSherman iphakathi kweloluhlu, ngasemzantsi kweminye i-Threeteeners- Mount Democrat , iNtaba yaseLincoln kunye neNtaba yaseBross .
Eyona ndawo iColorado Fourteener
INtaba uSherman, ngokuqhelekileyo ithathwa njengeyona ndlela elula kwiColorado yesi-55 I- Fourteeners , iphakame kakhulu ukunyuka kweentaba zokuqala, abantwana kunye neendwendwe ezingasetyenziswanga kwi-Colorado ephezulu.
Ehlotyeni, ukunyuka kweSherman kudinga kuphela ukunyuka kweendawo zokunyuka, kuquka iibhuthi ezipholileyo, izibonda zokuhamba, kunye ne-daypack. Ukuba unyuke kwiNtaba uSherman entwasahlobo, mhlawumbi uya kufuneka udibanise i-ax e-stash yakho.
Ebizwa ngokuba yiMfazwe yombutho jikelele uSherman
Ingqungquthela ibizwa ngokuba ngu-General Union uWilliam Tecumseh Sherman owathi, ngexesha leMfazwe yombutho, wenza umgaqo-nkqubo otshabeneyo ngenkathi ehamba e-Atlanta ngo-1864.
5 Ama-Round Round-Uhambo lokuhamba
Intaba uSherman, i-Colorado eyona nqanaba eliphakamileyo le-Colorado, kukunyuka ngokukhawuleza kumntu ofanelekileyo kuba kunokwenzeka ukubeka ipaki ephakamileyo njengama-12,000, ukushiya kuphela amawaka angamawaka amanyathelo okuphakama kwintlanganiso kunye nohambo olujikelezayo lokuhamba mahlanu. Njengazo zonke i- Colorado Fourteeners , nokuba kunjalo, iNtaba uSherman kufuneka iphathwe ngenhlonipho. Iindudumo ziyaqhawula i-Sawatch Range entshonalanga kwaye zihambe ngokukhawuleza. Kusoloko kubonakala kunomoya ophezulu kwiSherman kunye nentlanganiso.
Kungcono ukuba uqale ekuqaleni, uphathe imvula yamanzi, ugcine iliso kwimozulu ngokuduma kweemvula nokukhanyisa. Iindudumo zakha cishe phantsi kwemini kwaye zihamba ngokukhawuleza entabeni. Qala ekuqaleni kwaye ucwangcise ukuba uphume kwi-summit ngemini ukuze ugweme iindudumo kunye nombane.
Yithwala impahla yemvula kunye neengubo ezingaphezulu ukuze ugweme i-hypothermia kunye nokuthatha izinto ezibalulekileyo . Gcina ukhumbule ukuba intaba iyimangalo yezimayini ezibhekiselele kwiNkampani yamayini yeMini e-Leadville.
INtaba yeSherman Statistics
Intaba: Intaba kaSherman 14,036 iinyawo (4,278 iimitha)
Indawo: Central Colorado. Umzantsi-ntshona we Fairplay
Ububanzi: Ubume beMiyane
Ubunzima: Iklasi 2. echanekileyo. Ukuhamba kunye nokukhwela phezu kwamatye.
I-Trailhead Ukuphakama: ii- 12,000 iiinyawo (Ebusika indlela ivala iLeavick kuma-11,250 ubude)
Ukuphakama kokuphakama: ii-2,100 iinyawo okanye ii-2,900 iinyawo ukusuka kwidolophu yokuphila yaseLeavick
Uhambo olujikelezayo Umgama: 5.25 iekhilomitha (8.5 miles ukusuka kuLeavick)
Ukumisa amatende: Inkampu engaqhelekanga kwikampu yokuhamba kunye ne-Road Road 18.
Ukuhlala: Iihotele kunye nee-motels zise Fairplay nje ngasentla.
I dolophu e kufuphi: Fairplay
Izikhokelo ukuya kwiNqununu
Ukususela kwi-Fairplay emngceleni osenyakatho-ntshona weSouth Park, uqhube umzantsi kwi-US 285 malunga neyure elingaphezu kweeyure kwaye wenze ulungelelaniso kwi-Park County Road 18. Landela umzila weengcawa malunga neekhilomitha ezili-10 ukuya kwindawo yokupaka ekhethiweyo kwi-11,250 iidolophithi ezindala. Indlela ivaliwe apha ebusika. Ipaki eLeavick okanye qhubeka uqhuba.
I-Leavick yangaphambili, unokuqhuba umgwaqo onobuqhetseba ukuya kwelinye iikhilomitha ezili-1.5. Inqwelo yomgibeli inokuyenza ngenyameko kwiimeko ezilungileyo, kodwa ikhefu eliphezulu likhethiweyo.
Le ndlela inokuthi ingapheli emva kweemvula ezinzima. Iqhosha elincinci litsholwa kunye neendawo zokupaka zokugqibela ngaphambi kwesango kwii-12,000 iienyawo.
Intaba yeSherman Inkcazo yeNdlela
Ukusuka kwindawo yokupaka i-Leavick (4.25 ukuya kwi-summit evela eLeavick), ukunyuka kwendlela ukuya kwi-1.5 miles ukuya kwindawo ephezulu yokupaka. Qhubeka uhamba ngeendlela, udlula isango ngeenyawo ezili-12,000, ukuya kwiMayini engekho nto kunye nezinye izakhiwo zamatye ezindala ezili-12,300.
Qhubekani nenyakatho-ntshona ukuya kwindlela esesiphakamileyo esingaphantsi kweMihlaba yeMiholide ecacileyo kwaye ulandele indlela endala ukuya kwi-mine ibe ngama-12,900. Ukunyuka ngasentshonalanga kwaye uphazamise ilitye elikhuphayo kunye nomzila ongena mgxobhozo ukuya kwi-13,140-foot-high-saddle phakathi kweNtaba yeSherman ngakwesokudla (ngasentla) kunye ne-13,748 kwienyawo zeNtaba uSheridan ngakwesobunxele (ngasentla). Ukusuka apha uhamba ngaphantsi kwee-1 000 ubude bokufumana inkulumo kaSherman.
Khuphukela ngqo kwiNtaba yaseSherman ebanzi-ntshona yonxweme ebanzi, emva kweendlela ezikhohliweyo (khetha okucacileyo xa kunokwenzeka). Emva kweenyawo ezimbalwa zeenyawo zokunyuka, i-ridge iqala ukunciphisa. Ukunyuka kwindlela efanelekileyo ehamba kunye nenqanawa ukuya entlanganisweni ende ende yeentaba. Fumana i-summit cairn, ngokuqhelekileyo ibe yinqaba yamatye, kwaye usayine igama lakho kwirejistra esemthethweni. Kulapho-uyenzile. I-Fourteener yakho yokuqala!
Ukuhla kweyona ndawo iNtabeni yeSherman kukuguqula enye indlela oye wabuyela ngayo entabeni. Ngasekupheleni kwentwasahlobo nasekuqaleni kwehlobo, unokwenza ngokukhawuleza uhlasele iinqanaba zekhephu kwiSherman esempuma-ntshona. Khawukhumbule ukuphatha nokusebenzisa i-ax ax. Oku kwenzelwa i-ski desccent descente ukuba kukho ikhephu elaneleyo.